अभियोगित बाल हत्यारे डार्ली रूटर: दोषी वा रेलकोड?
डर्ली रूटियर 6, 1 996को शुरुआती बिहानको मृत्युमा मारिएका दुई जना छोराहरू, डेवन र डमोन रुटरियरको हत्याको दोषी, टेक्सासमा मृत्यु पङ्क्तिमा छ। हत्याको अनुसन्धानका लागि मीडिया कवरेज रूटेर र अर्को निर्दोष जस्तो आमा जसको बच्चाहरु उनको जीवनशैली को बाटो मा रहन थिए, त्यसैले उनले उनलाई उनको लागि मारे।
त्यो पनि बारबरा डेविस द्वारा किताबहरु को "बहुमूल्य एन्जिल्स" को रूप मा र उनको परीक्षण मा अभियोजनकर्ता डार्ली रूटियर को चित्रण गर्दछ।
अधिकतर यो सुसान स्मिथको दुई वर्ष पहिलेको अवस्थामा पछि भेट्टाउन पाए।
उनको विश्वासको कारण, डार्ली र उनको परिवारले कानूनी प्रणालीको बारेमा अझ बढी धेरै सिकेको छ र धेरै फरक चित्र प्रस्तुत गरेका छन् भन्दा तुलनामा प्रेस द्वारा देखाइएको थियो। यहाँ सम्म कि बारबरा डेविस को मामला को बारे मा उनको दिमाग बदल्यो र अभियोजक को मामला मा विवाद मा उनको किताब को एक अध्याय जोड दिए।
दुवै पक्ष पढ्नुहोस् र आफैलाई निर्णय गर्नुहोस् यदि यो जवान महिला अभियोगकर्ता द्वारा चित्रित शैतान हो र कानुनी प्रणालीको भित्तामा काम गर्ने एक महिला महिला।
डार्ली र डिनर रुटरियर
डार्ली र डिनर रुटियर अगस्त 1 993मा हाई स्कूल पढेपछि डार्ली उच्च स्तरका मिठाई थिए। 1988 सम्म, तिनीहरूका पहिलो केटा, डेभन रश र 1 99 1 मा डेमोन क्रिश्चियन थिए, उनीहरूको दोस्रो पुत्र जन्मियो
उनीहरूको पारिवारिक वृद्धको रूपमा, डिनरको कम्प्यूटर-सम्बन्धी व्यवसाय भयो र परिवारले एक समृद्ध क्षेत्रलाई रोल्लेट, टेक्सासमा डेल्रोक हाइट्स एड्रेसको रुपमा चिनिन्छ।
जीवन रूटियर्स को लागि राम्रो तरिकाले जाँदै थियो र तिनीहरूले आफ्नो नयाँ वरदान जस्तै नयाँ जगुआर, केबिन क्रूजर, लुगा सामान, गहना र लुगा लगाएर आफ्नो सफलता मनाए।
एक जीवन शैली जीवन बिताउने केही वर्ष पछि डिनरको व्यवसायले गल्ती गर्न थाल्यो र यसका साथ यो जोडीको लागि वित्तीय समस्या आयो।
अफवाहहरू कि जोडीको सम्बन्ध समस्यामा परेको थियो र त्यहाँ विवाहित समस्याहरूको कुरा थियो। मित्रले डार्लीलाई भने, उनको उपस्थितिको साथ खिचिएको थियो, कथित रूपमा बच्चाहरूको लागि धैर्यता थियो। अफवाहहरूको बावजूद, अक्टोबर 18, 1 995मा, दम्पतीले आफ्नो तेस्रो छोरा ड्रेक थियो, पछि डर्लीले अनैतिक निराशाको अनुभव गरे।
गर्भवती समयमा प्राप्त गर्नुभएका वजन गुमाउन हताशले उनलाई आहार गोलहरू लिन मद्दत पुर्याउन र उनको मूड स्विंगमा योगदान गर्न असफल भयो। उनले डिनिनलाई आत्मिक विचारहरूबारे सम्बोधन गरे र दुईले कुरा गरे र उनीहरूको भविष्यको पुनरावलोकन गरे। चीजहरू जवान युगलको लागि तयारी गरिरहेका थिए। तर यस आशा अवधिको साथ एक त्रासदीले छोटो छोटो थियो कि कसैले पनि भविष्यवाणी गरेको थिएन।
दाउन्ड र डेमनको हत्या
6 जून 1 996मा बिहान 2:30 लगभग, रोलेट पुलिसले रुटियर घरबाट आपातकालीन कल प्राप्त गर्यो। डार्ली चिल्लाउँदै थिइन् कि उनी र उनको दुई केटाहरू एक घुसपैठ गरेर चोरी भएका थिए र उनको केटाहरू मरिरहेका थिए। डार्ल रुटरियर, डार्लीको चिन्ताले जगेडा गरे, सीढ़ीले पारिवारिक कोठामा भाग्यो, जहाँ उनको श्रीमती र दुई छोराले टेलिभिजनमा राखेकी छिन्। अब, प्रवेश गरेको रूपमा, उसले सबै देख्यो उनको दुई छोरा र तिनकी पत्नीको रगत लुगा लगाइयो ।
डिनले डेभनलाई बचाउन खोजे, जसले सास फेर्न सकेनन्। बारबरा डेविसले रिपोर्ट गरेअनुसार "दुई जना छोराछोरीहरू बीचको पीडा, डरलाग्दो बुबाले क्षणिक रूपमा घृणा गर्थे, त्यसपछि छोरालाई सोचेको थियो कार्डियोपोलेमोनरी पुनरुत्थान सुरू गर्ने निर्णय गरे जसले सास फेर्न सकेन। डार्नले डेनको नाकमाथि आफ्नो हात राखे र तिनको मुखको छेउमा खसाए। फिर्ता बुबाको अनुहारमा। " डमोन, गहिरो ग्यासले उनको छातीमा हावाको लागि संघर्ष गर्छ।
घरको समानार्थी र पुलिसले भरिएको छ। आमाबाबुले बच्चाहरुलाई बचाउन खोजे जस्तै प्रहरीले घुसपैठको लागि घर खोजे जो डार्लीले संलग्न गेराजको दिशामा चलेको थियो। पुलिस डेभिड वाडेल र सार्जेंट मैथ वाल्लिंगले भान्साको काउन्टरमा डाईरीको पर्स र महँगो गहनामा खूनी चक्कुलाई उल्लेख गरे, गेराजमा सञ्झ्यालको पर्दामा स्लैश र फ्लोरमा रगत खसेको थियो।
चिकित्सकको बच्चालाई बचाउन असक्षम भयो। चक्कुले केटाहरूको छातीमा गहिरो ग्यास छोडे र उनीहरूको फेफड़ोंलाई ठोक्कियो। हावाका लागि गेसिंग, तिनीहरू दुबै दुखी भयको सामना गर्थे। डार्लीको घाँटीहरू - अधिक सतर्क र जीवनको धम्कीले अस्थायी रूपमा पनीरहेका थिए जबकि डार्लीले एक घण्टा पहिले पहिले नै भयानक घटनाका प्रहरीलाई बताए।
डार्ली रूटियर तिनको रगतको छेउमा रातो बस्तीमा उनको पोर्चमा उभियो र प्रहरीलाई उनीहरूले र उनको दुइटा छोराहरू भएको घटनाको बारेमा के सम्झना गरे।
उनले भने कि एक घुसाउने व्यक्तिले आफ्नो घर प्रवेश गरे र "माउन्ट" उनको सुतेको बेला उनी सुत्थे। जब उनले उठे, उनी चिच्याइन् र तिनको साथ लडेका थिए, तिनका प्रहारबाट लड्न थाले। उनले भन्यो कि उसले त्यसपछि गेराज तिर भाग्यो र त्यो उनको दुई छोराहरू रगतमा राखिएका थिए जब थियो।
उनीहरूले आक्रमण गरेपछि उनीहरूले केही कुरा सुनेनन्। उनले इन्टर्रुडरलाई मध्यम-देखि-लामो ऊँचाईको रूपमा वर्णन गरे, कालो टी-शर्ट, कालो जीन्स र एक बेसबल टोपमा लुगा लगाएको थियो।
डार्ली र डिनर अस्पतालमा लिएका थिए र रोलेट पुलिस विभागले घर कब्जा गरे र अनुसन्धान सुरु गरे।
Devon र Damon को हत्या को 11 दिन भित्र, रोल्ट पुलिस विभाग ले उसलाई छोराहरु को राजधानी को हत्या संग उनको आरोप दलेर डट कमर को गिरफ्तार गर्यो।
डार्ली विरुद्ध अभियोजकको मुद्दा यी प्रमुख मुद्दाहरूसँग प्रस्तुत गरिएको थियो:
कोरोनर जेनिस टाउनसेन्ड-फर्चम्यानले जनाएको छ कि केटाकेटीहरूले घातक र गहिरो थिए, तर डार्लीको शंकास्पद घातक रूपमा वर्णन गरिएको थियो, सम्भवतः आफूलाई आत्महत्या गरे।
प्यारेडिक लैरी इनफोर्डले डार्लीले अस्पतालको बाटोमा एम्बुलेंसमा हुँदा उनीहरूको बच्चाको अवस्थाबारे कहिल्यै सोधेनन्।
चार्ल्स हैमिल्टनले दृश्यको अन्वेषण गर्ने एक फिंगरप्रिन्ट विशेषज्ञले डार्ली र तिनका छोराछोरीलाई मात्र छापेका छन।
एक रगत विशेषज्ञले टोम बेवेलले भने कि डार्लीको नाइट्सटर्टमा रगतले आफ्ना छोराहरूसँग रगतको बिरोध गरे। यो उनको मा स्प्रे गरिएको थियो र उनले सुझाव दिए कि यो हुन सक्छ कि उनले आफ्नो हथियार अगाडी बढाए गति मा उठाए।
अस्पतालबाट नर्सहरूको प्रमाणपत्र दिईएको छ कि डार्लीले आफ्ना छोराहरूको हानिमा दु: ख देखिनन्। उनीहरूले दावी गरे कि उनीहरूले कुकुरलाई भान्साको भान्साको छेउमा राखे र उनीहरूले चाँहिमा छाप राखे भन्ने कुरालाई अझ बढी चिन्ता लाग्दथ्यो।
यो पनि उल्लेख गरिएको खून क्लियररमा वैक्यूम क्लीनर र रगत स्पटहरू फेला पारेको थियो, यो संकेत थियो कि अपराध गरेपछि वैक्यूम क्लीनर राखिएको थियो।
चार्ल्स लिंच, एक ट्रेस-सबूत विशेषज्ञ, ले भन्यो कि एक घुसपैठ को लागि यो दृश्य को रक्त को बिना बिना छोड्न असंभव थियो। रुटियर घर बाहिर कुनै रगत भेटिएन।
एफबीआईको विशेष एजेन्टर अल ब्रेर्टेले यो पुष्टि गरे कि विन्डो स्क्रिनमा कटौती हुन सक्दछ केवल एक इन्फ्रुडर द्वारा हटाइएको थियो। साथै, डार्लीको महँगो गहना एक प्रेरणाको रूपमा अयोग्य, छुट्याउने लुगा छोडिएको थियो। उत्पीडनको रूपमा उत्तेजनाको रूपमा, उहाँले भन्नुभयो कि एक बलात्कारले आफ्ना छोराछोरीलाई पेश गर्न को लागी उनको पेशा गर्ने, उनीहरूलाई मारेको छैन। अनि अन्ततः उनले केटाकेटीहरूलाई हारेको सतावटलाई सम्बोधन गरे र उनको रायमा, यो अजनबी द्वारा नहीं, अत्यधिक क्रोध संग एक व्यक्तिगत हमला थियो।
डार्लीले आफ्नो सल्लाहको सल्लाह विरुद्ध खडा लिनुभयो। तिनीहरूले तिनलाई सोधे कि उनले विभिन्न पुलिसलाई कथाको विभिन्न संस्करणहरूलाई बताए। तिनीहरूले आफ्नो कुकुरको बारेमा सोध्थे, जो अजनबीहरूमा छालिएका थिए तर छाला थिएन जब इन्टर्यूडरले उनको घरमा प्रवेश गर्यो। तिनीहरूले उनको बारेमा सोधे किन कि तिनको भान्सा सफा गरियो तर टेस्ट अन्तर्गत सबैले रगतको अवशेष देखाउनुभयो।
अधिकांश प्रश्नहरूको लागि, डार्लीले जवाफ दिए कि उनीहरूलाई सम्झना थिएन वा थाहा थिएन।
जोरीले डर्ली रूटरियरलाई हत्याको दोषी पाए र उनको मृत्युको सजाय पाए।
डार्ली रूटरियर विरुद्ध अभियुक्तहरूको मुद्दा परिस्थितिमा थियो र विशेषज्ञहरूको आधारमा आधारित थियो जसमा प्रमाणपत्र को बारे मा एकत्रित वा अपराध दृश्य मा देखा पर्यो। अभियुक्तले यो के गर्ने तयारी गरे, जो हत्याको दोषी दार्लीलाई भेट्न जूरी पाउन थालेको थियो, तर सबैजना जरुरीलाई देखाइएको प्रमाण थियो? यदि छैन भने, किन यो थिएन?
डार्ली रूटरियरको अपील सूची को वेब साइटहरु लाई उनको मुद्दाहरु र तथ्यहरु लाई उनको परीक्षण पछि लाइट आएको छ कि यदि सत्य हो भने पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हुनेछ कि नयाँ परीक्षण उपयुक्त हुनेछ। ती केही मुद्दाहरू समावेश छन्:
दार्ली रूटियरको प्रतिनिधित्व गर्ने अभियोगमा चासोको स्पष्ट झगडा थियो, किनभने उनीहरूले डिनर रूटरियरसँग पूर्व-व्यवस्था गरेका थिए र अन्य परिवारका सदस्यहरूले डिनरलाई असर पार्न सक्ने कुनै पनि सुरक्षाको पछि लागेनन्।
यो अभियुक्तले कथित रूपमा फोरेंसिक परीक्षाहरू पूरा गर्न रक्षाको लागि प्रमुख विशेषज्ञहरू रोकेको छ।
चिन्तितको अन्य क्षेत्रहरू जुन कहिल्यै जूरीको ध्यानमा नपढेका थिए, डार्लीको कट र तस्विरको चित्रहरू समावेश गर्दछ जुन उनको हत्याको रात अस्पतालमा लगाइएको थियो। कम से कम एक जरर पत्रकारहरु लाई भन्यो कि यदि उनले तस्वीरहरु लाई देखे हो भने उनको सजाय को रूप मा कभी नहीं हुनेछ।
खरानी औंला छापहरू भेट्टाइयो कि डार्ली, डिनर, बच्चा वा कुनै पुलिस वा अन्य रुटियर घरको अरू कसैलाई हत्याको रात छैन। यसले उनको परीक्षणको समयमा दिईएको गवाहीको विरोध गर्दछ जुन घर बाहिर कुनै औंला छापहरू फेला परेनन्।
प्रश्नहरू उनीहरूको सुरक्षा टोलीले जवाफ दिए:
एक खूनी फिंगरप्रिन्ट लिङ्ग कक्ष तालिकामा फेला पर्यो। यो को को हो?
गेराज को ढोका मा एक खूनी फिंगरप्रिंट थियो। यो को को हो?
डिनर रुटरियरको जीन्सले उनीहरूको रगत खान्थे। कसको रगत हो?
रुटरियर लिङ्ग रूममा पबनिक कपाल भेटियो। यो को को हो?
डार्लीको नाइट्सटर्टमा रक्त कसरी भयो र यो को हो?
के हत्याको खोजी गर्दा प्रहरीले कुखुरामा चोरीमा मलबे पाउँछ वा यो पर्दाको ढोकाबाट आयो?
डिनर रुटियरले बीमा घोटालालाई व्यवस्थित गर्न खोजेको छ, जसमा कसैलाई उनीहरूको घरमा तोडिएको थियो।
उनले स्वीकृत गरेका छन् कि उहाँले एक ब्रेक-इन व्यवस्था गर्ने प्रारम्भिक चरणहरू शुरु गर्नुभएको छ, तर यो गरे पछि जब कुनै घरमा थिएन। कुनै ज्यारले यो प्रवेश सुनेनन्।
जूरी द्वारा देखे गए उत्तेजित जन्मदिन को पार्टी फिलिम को दरले उनको परिवार को अन्य सदस्यहरु संग दारी को कब्रहरुमा नृत्य दिखाया, तर उन दृश्यहरु को अघिल्लो घन्टा को फिल्मीकरण मा शामिल गरे जब डर्ली आफ्नो पति संग कब्रहरु मा दुख र दुख डिनर। किन फुटेजमा थप फुटेज देखाइएको थिएन?
छिमेकीहरूले हत्या गरेको एक हप्तामा रुटरियर घरको सामने एक कालो कार देखेर रिपोर्ट गरेका पड़ोसीहरू। अन्य छिमेकीहरूले पनि त्यही कारलाई हत्याको रातमा क्षेत्र छोडेर हेरे। के यी रिपोर्टहरू पुलिसद्वारा अनुसन्धान गरियो?
उनको परीक्षणमा अन्वेषकहरूले क्रस परीक्षाको समयमा आत्म-भेदभाव विरुद्ध आफ्नो पाँचौं संशोधन अधिकारलाई बोलाए, उनीहरूको गवाही पुनर्निर्माणबाट रक्षा रोक्न। यी अन्वेषकहरूले क्रस-परीक्षण गरेर के गरे?
त्यहाँ प्रहरीले छलफल गरेको थियो कि उनीहरूले यो प्रमाणको रूपमा सुरक्षा गरेन जुन यो संग्रहको सम्भवतः क्षतिग्रस्त हुन सक्छ। के यो साँच्चै देखा पर्दछ?
आवश्यक प्रश्नहरूको थप थप प्रश्नहरू
भित्रबाट काटिएको रूपमा अन्वेषकहरूले प्रेसलाई रिपोर्ट गरे पछि पछि अदालतमा साबित हुन बाहिर बाहिर काटिएको थियो।
जब प्रमेमीले दृश्यमा आइपुग्यो भने उनीहरूले डिनर रुटरियर बाहिर थियो भने, तर डिनिन आफ्ना छोराछोरीलाई बचाउन खोज्दै थिए। बाहिर मानिस को थिए?
के अस्पतालको नर्सहरूको गवाहीले गम्भीरतापूर्वक पहिले अभियोगको आरोपमा नक्कली परीक्षामा सहभागी गराईरहेको थियो र यो रिपोर्टको रूपमा के थियो?
डार्लीमा सञ्चालन गर्ने सर्जनले भने कि उनको गर्दनमा काटा मासुको मासुको2मिटर थियो तर माटो धमनीको लागि सतर्क थियो। घाँटीको नतिजाको रूपमा हजुरआमा लगाइएको थियो हजुरले उनको गहिरो भित्र गहिरो घुम्न छोड्यो। के जरीले आफ्नो घाँटीको गम्भीरताको रूपमा स्पष्ट बुझाइ गरे?
त्यहाँ अदालत रिपोर्टरले जूरी को गवाही को एक अनुचित पढ्ने फिर्ता थियो, त्यो ट्रान्सक्रिप्टमा गरेको गल्तीहरूको कारण?
अभियोगमा उक्त घटनामा उनीहरूको हिरासतमा कुनै पनि प्रमाणको पहुँच प्रदान गर्न अस्वीकार गरिएको छ। यो किन सबै इच्छुक रुचि पार्टीहरूको लागि उपलब्ध छैन?
डीएनए परीक्षणमा भएका प्रगतिहरूले यी प्रश्नहरू धेरै आराम गर्न सकेन। परीक्षण गर्न त्यस्तो अहिल्यै किन छ?
केहि लेखक जो डर्ली रूटरियर संग साक्षात्कार गरेको छ उनको नयाँ लड़ाई प्राप्त गर्न को लागी लडने को लागि मदद को फैसला गरेको छ। उनीहरूको अवस्थाबारे उनीहरूको रायको रिपोर्ट गरिसकेपछि, उनीहरूले उनीहरूको भ्रमण गर्ने क्षमतालाई ब्लक गरिएको छ वा त्यस्तो असुविधाजनक बनाइएको छ जुन सानो हुन सक्दछ।
मृत्यु पंक्ति कोट्रेट एन्ड्रयू को प्रोफाईल
अपराध प्रोफाइल: डेबरा इभान्स प्रकरण
Womb Raiders - भ्रूण अपहरण को मामलाहरु
मार्कस Schrenker फ्लेड मौत वित्तीय मुसीबत देखि बचने को लागि
एमी आर्चर-गिलिगन र उनको हत्या फैक्टरी
डिएगो मराडोनाको 'ह्यान्ड अफ द गोउ' लक्ष्य
क्याप्सन पट्टी बिना डेल्फी फारम तान्नुहोस्
शुक्र Gemini महिला
के मैले एसोसिएट डिग्री कमाउनुपर्छ?
लोगो को विज्ञान को लोगो
परिभाषा र शीर्षक प्रकरण र हेडलाइन स्टाइलको उदाहरण
सीसिकेपन रोकथाम र उपचार
मधुमेह विस्फोट वास: मतभेद र समानता
टाइटन एनिमेमा आक्रमणमा5भन्दा खराब क्यारेक्टर
शीर्ष माइकल जैक्सन गीत '80s, भाग2को
नागरिक अधिकार आन्दोलनको बारेमा समकालीन चलचित्रहरू
सङ्गीतमा ट्रिपलहरू कसरी गणना गर्ने
दुई एक्वायर्सको बीचमा प्रेम अनुकूलता
फोटो गैलरी: 2011 होंडा सीबीआर 250 आर
डिस्कस को एक चित्रित इतिहास
प्रतिनिधि सभा को अध्यक्ष को बारे मा
1918 स्पैनिश फ्लू पाण्डेनिक चित्र
बेटी सेतो: खेलको शोधको पहिलो महिला
सार संरचना को परिभाषा
तपाईं अर्थव्यवस्था विज्ञान को बारे मा थाहा हुनु पर्छ
अंग्रेजीमा भ्रामक प्रर्दशन जोडी